सावधान ! भित्रि बस्त्र किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ - Bidur Khabar
सावधान ! भित्रि बस्त्र किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छ
विदुर खबर २०७५ साउन १९ गते ८:३६
एजेन्सी:- पहिरनको कुरा गर्दा हामी बाहिरी बस्त्र सम्झन्छौं, जसले हाम्रो आङ ढाक्छ । लाज ढाक्छ । जाडो र गर्मीबाट शरीरलाई सन्तुलित राख्छ । स्टाइलिस देखाउँछ । फेसनेबल देखाउँछ । व्यक्तित्व बढाउँछ ।
पेन्टी कहिले बदल्नुपर्छ ? अक्सर यसबारे हामी उति ख्याल गदर्ैनौं । अरु लुगा, जुत्ता आदि त समय समयमा वा फेसन अनुरुप बदल्छौं । तर, पेन्टी ?
राती सुत्दा पेन्टी लगाउने कि नलगाउने ? संभव भएसम्म पेन्टी नलगाई सुत्नु राम्रो हो । पेन्टी नलगाइ सुन्दा महिलाहरुले छुट्टै आनन्द पाउँछन् र शरीरको त्यो भागलाई पनि राहत मिल्छ |